Muraayadaha Muraayadaha Haweenka ee Southcal Green / Madoow Hanukeii
URURINTA KOONFUR GALBEED
Wax kasta oo aad raadineyso, gudaha Koonfurta California waad heli doontaa:
Nalalka, xagaaga, sagxadda, xawaaraha, xeebta iyo badda ama xasilloonida buuxda ee xeebta beledka ee xiddigta ka ah gobolka ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha nagu dhiirrigeliyey in aan qaabeyno qaabka asalka ah ee cajiibka ah ee muraayadaha indhaha. KOONFUR GALBEED. Naqshadaynta iyo kor u qaadista moodooyinkayaga SOUTHCAL sidoo kale waa natiijada ka dhalatay saamaynta joogitaanka weyn ee moodada iyo farshaxanku ku leeyihiin gobolka, iyo awoodda ay warshadaha filimku innagu leeyihiin; runti, muraayadahayagu waxay ina xasuusin karaan nooca loo isticmaalo mid ka mid ah boodhadhka ugu caansan adduunka, midka aan ku aqrin karno: HOLLYWOOD si weyn.
Laakiin markay tahay midabaynta moodooyinka ku jira ururintan, waxaa naloo qaaday saamaynta ay autumns-ka Koonfurta California nagu leeyihiin, meelaha ay ku yaalliin geedaha tufaaxa bisha Oktoobar, beeraha xasilloonida iyo is-hoosaysiinta ah. magaalada Oak Glen, halkaas oo dadka deggan magaalada mashquulka badan ee Los Angeles ay u qulqulayaan si ay u nastaan ​​una noolaadaan maalmaha caajiska ah ee xagaaga dambe.
Waxay dareemeysaa dhicitaanka Koonfurta Kalifoorniya inay soo socoto marka cimiladu cararto oo caleemaha geedaha ay si gaar ah ugu dhacaan daruurahana ay cirka daboolaan iyagoo aan u oggolaan qorraxdu inay dhacdo. Muraayadahayada ayaa sidoo kale lagu dhiirrigeliyaa habka ay caleemaha u qaataan midabbada cagaaran ee casaanka ah iyo dhalada cagaaran ee ka soo horjeedka asalka waddada Stoddard Peak, halkaas oo midabada ugu wanaagsan xilliga dayrta.